'दशै चैतबाट असोज-कार्तिकमा सारिएको हो' - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
दशै कसरी सुरु भयो ? कसले कहिलेदेखि मनाउन थालियो भन्ने विषयमा दशैसँगै बहस सुरु हुन्छ । सरकारले यसअघि दिने १५ दिनको विदा कटौती गरेर ४ दिनमा आइपुगेकोबाट पनि दशैको महत्व कमजोर बन्दै गएको छ । अहिले दशैलाई सबैले दशैको रुपमा मान्न पनि छोडेको अवस्था छ । कतिपयले यो चार्डलाई परिमार्जन गर्नु पर्छ भन्न थालेका छन् । खास दशै के हो ? सस्कृतिविद् सास्कृति क्रान्तिका अगुवा मोदनाथ प्रश्रितसँगको छोटो कुराकानी
दशै खास कसरी सुरु भयो ?
कृषियुगमा रहँदादेखि नै दशैं पर्व मनाउँने गरेको इतिहास र परम्परा पाईन्छ । पहिला दसैँ चैत महिनामा मनाउँने चलन थियो । त्यो रुखो मौसम भएकाले त्यति उत्तम भएन । त्यसैले दसैँ पर्वलाई असोज महिनामा सारेको हो भन्ने पौराणिक इतिहास पाइन्छ ।
दशमी संस्कृत शब्द हो । त्यही दशमीबाट दशै भयो । विजयादशमी भनेपछि विजय जोडिन्छ, विजय भनेको जित हो । त्रेता युगमा रामले लंकामा विजय प्राप्त गरे । पछि पृथ्वी नारायण शाहको दिग्बिजय पनि जोडियो । तर यसको प्रारम्भ नत मैशासुरलाई मारेको कारणबाट हो, न त रावणलाई नत पृथ्वी नारायणको दिग्विजयको कारणले नै आरम्भ भएको हो । यो त पहिलेदेखि नै चलेको चलन हो । यसको प्रारम्भ भएको नेपालबाटै हो । अरु देशबाट होइन । दशै चैतबाट सहजताका लागि सारिएको हो ।
के अनुकूल थियो र दशै असोज कार्तिकमा सार्नुपर्ने भयो ?
दक्षिण एसियाको सिन्धु उपत्यका र गंगा मैदान कृषिका निम्ति शानदार भूमि रहिआएको छ । त्यसले पनि यो मौसम र दशैंबीचको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित बन्दै आएको छ । असोज–कात्तिकमा सबैले बालि भित्र्याई सकेका हुन्छन् । यो मौसममा बालि भित्र्याएपछि सबै फुर्स्दिला हुने भएकाले आफन्त (छोरी,चेली, दाईभाई, इष्टमित्र) सबैसँग भेटघाट गर्न र मौसमका हिसावले पनि उपयुक्त भएकाले यो चाड स्थापित भएको हो । गाई, भैसी ब्याउने, फलफुल पाउँने मौसम पनि शरद ऋतु नै भएकाले दशैं पर्वका लागि यो भन्दा उपयुक्त मौसम वन्दै आएको छ । दक्षिण एसियाको सिन्धु उपत्यका र गंगा मैदान कृषिका निम्ति शानदार भूमि रहिआएको छ । त्यसले पनि यो मौसम र दसैँबीचको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित बन्दै आएको छ ।
पशुपतिमा दलितको प्रवेश यसरी सम्भव भयो हामीले त्यति प्रयत्न नगरेको भए, यो परिवर्तन हुने थिएन
यो हिन्दुहरुको चाडहोकी नेपालीको चाड ? सास्कृतिक हिसावले के भन्न सुकिन्छ ?
यो चाड शक्तिपूजासँग सम्वन्धित छ । शक्ति पूजा भनेको मातृ पूजा हो । मातृपूजा विभिन्न जातीले विभिन्न तरिकाले मनाएका हुन्छन् । जस्तो किराँत, थारु सबैले मातृपूजा गरेका हुन्छन् । ती सबै समूदायले यो पर्व मनाएका हुन्छन् । यसका धार्मिक र साँस्कृतिक पक्ष फरक–फरक छन् । तर, दशैं सबैको साझा बनेको छ ।नेपाल बहुजातिय, बहुधार्मिक मुलुक हो । जस्तो किराँत, थारु सबैले मातृपूजा गरेका हुन्छन् । ती सबै समूदायले यो पर्व मनाएका हुन्छन् ।
धार्मिक पक्ष चै दशैमा कसरी जोडियो त ?
यसका धार्मिक र साँस्कृतिक पक्ष फरक–फरक छन् । तर, दशैं सबैको साझा बनेको छ । यहाँ एउटा संस्कृतिलाई अर्को संस्कृतिले तान्न सक्ने परम्परा छ । त्यसले पनि साँस्कृतिक पर्वहरु उल्लासपूर्ण रुपमा मनाउने गरिन्छ । एक जातिको संस्कृति अर्को जातिसँग अन्तरसम्वन्धित हुन जान्छन् । उदाहरणका रुपमा अर्घाखाँचीको पाली गाउँमा अहिले मुसलमानले हिन्दुहरुले जसरी नै दसैँ मान्ने गरेका छन् । यसरी हेर्दा पनि हाम्रा धेरै चाडहरु विस्तारै साझा चाड बन्न थालेका छन् ।